Tag: Caalamka | Sagal Radio Services
Beesha Caalamka oo Walaac ka muujiyay Caga-juleyn ay Sheegeen in lagu hayo Musharraxiinta
Beesha Caalamka ayaa War-saxaafadeed ay Wadajir u soo saareen Maanta, ayaa waxay Walaac xooggan kaga muujiyeen ku-takri-fal, cadaalad-darro iyo caga-jugleyn ay sheegeen inay ka dhex-jirto doorashooyinka socda.
Sagal Radio Services • News Report • October 21, 2016
Beesha Caalamka ayaa soo dhoweysay dhismaha maamul goboleedka Hirshabeelle oo Madaxweynaha maamulkaas iyo ku xigeenkiisa toddobaadkan lagu doortay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle.
Beesha Caalamka oo ugu baaqay Baarlamaanka inay ansixiyaan hanaanka doorasho ee 2016
War si wada jir ah uga soo baxay Qaramada Midoobey, Midowga Afrika, Midowga Yurub, IGAD, Mareykanka, Itoobiya, Sweden, Talyaaniga iyo Itoobiya ayaa walaac looga muujiyay habka dheer ee Baarlamaanka Federaalka uu ku ansixinayo hanaanka doorasho ee Ra’iisul Wasaaraha u gudbiyay 30-kii bishii April.
Beesha Caalamka oo walaac ka muujisay Tagitaanka C/fataax ee Magaalada Baladweyne
Shir bishiiba mar la qabto oo loogu magac-daray PSG1 (Peacebuilding and statebuilding goals) oo qayb ka ah "NEW DEAL", kana dhacay hoolka shirarka ee AMISOM VIP - MIA, Mogadishu ayaa waxaa looga hadlay qodobbo dhawr ah oo ay ka mid yihiin; dastuurka, doorashada 2016-ka iyo maamul u sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe.
Beesha Caalamka oo ka sugeysa Madaxda Soomaalida inay go’aan gaaraan ka hor 28-ka bishan
Beesha Caalamka ayaa sheegtay inay ka fileyso Hogaamiyeyaasha Soomaalida inay si deg deg ah u soo gudbiyaan go’aan wada jir ah oo ku saabsan hab doorasho la isku raacsan yahay oo sanadkan 2016 ka dhaca dalka, iyadoo aanay jiri doonin waqti kordhin loo sameeyo dowladda hada jirta.
Beesha Caalamka oo sheegay in aan loo dulqaadan doonin sii socoshada dagaalada Gaalkacyo
Bayaan ay si wada jir ah u soo saareen xafiisyada ay Soomaaliya ku leeyihiin QM, Midowga Africa, urur goboleedka IGAD, Midowga Yurub iyo wadamo kale oo Soomaaliya taageera ayaa waxay ku cambaareeyeen dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Beesha Caalamka oo si wada jir ah u soo dhoweysay doorashadii Cadaado iyo Guushii Guuleed
Sagal Radio Services • News Report/Opinion • July 5, 2015
Qaramada Midoobay, Urur Goboleedka Bariga Afrika ee IGAD, AMISOM, Midowga Afrika, Midowga Yurub iyo Dowladda Mareykanka ayaa si Wadajir ah u soo dhaweeyay doorashadii madaxweynaha iyo ku xigeenka Galmudug ee shalay ka dhacday degmada Cadaado ee Gobolka Galguduud, iyagoo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka la doortay u diray hamblayo.